Andy Murray Oo Ku Tuntay Grigor Dimitrov Kulankii Finalka China Open
HomeWararka MaantaAndy Murray Oo Ku Tuntay Grigor Dimitrov Kulankii Finalka China Open
Andy Murray ayaa difaacday horyaalkiisi shanaad ee Jaani goonida ama kali kalida ciyaarta Tennista, iyo markiisii 40 aad ee intii uu ciyaaraha ku soo dhex jiray – kadib markii uu kaga badiyey laacibka kale ee Grigor Dimitrov 6-4 7-6 (7-2) kulankii finalka tartanka China Open.
Ninka haysta kaalinta labaad ee laacibka Tenniska dunida, Murray ayaa is difaac iyo halis badan kala kulmay xidiga reer Bulgaria eek a soo horjeeday, balse aakhirkii wiilka Scotland ka soo jeeda, wuxuu ku guuleystay in bilada ama koobkan qaaliga ah uu xoog iyo awood kaga qaado laguna dhex gudoon siiyo ciyaartan ku dhex martay magaalada Beijing.
“Waxaan soo maray sanadkii ugu adkaa intii aan ciyaaraha ku soo dhex jiray, inaan xili dambe guusha hananayay kulamadii u dambeeyey ee aan ciyaaray oo dhan ayaana taas kuu cadaynaysa,” ayuu Murray u sheegay warfidiyaha ciyaaraha ee Sky Sports kadib kulankii Axadii.
“Todobaad aad u qiimo badan ayuu ani ahaan ii ahaa. Ciyaartii maantuna waxay ahayd mid xamaasadeedu aad u sarayso. Grigor ilaa dhamaadkii ayuu dagaal adag igula jiray, kaas oo igu adkeeyey inaan naf bax labadii wareeg ee u dambeeyey guusha kaga xoogo.
Kooxda Celtic oo la wareegtay Kolo Toure
Real Madrid Oo Garaacday Bayern Munich + Kulankii Ancelotti iyo Zidane
04/08/2016 Abdiwahab Ahmed
Suarez Oo Neymar Booska Kala Baxay – Ronaldo & Messi-na Kula Tartami Doona Xidigga Yurub